Best PVC PET PP qaydhiin Waxyaabaha qeybiye - ALPPM
Best PVC PET PP qaydhiin Waxyaabaha qeybiye
10.4 Propylene Block acetate
10.5 Polypropylene, saamaynta acetate
11Sida aynu kaa caawin kara
11.1 -qeybiyaha ah
11.2 On gaarsiinta waqtiga
11.3 daryeelka 24/7 macaamiisha
11.4 Business in ay is dhexgalka Business
Ka dib markii wax looga qabto si guul ah in baakooyinka qalabka iyo bixinta adeegyada ku dadaala in macaamiisheena ee la xiriirta la baakada, ALPPM ayaa u dhaqaaqay dhinaca more kalifaya category a kala duwan, taas oo waa wax caag ah sida xawliga ah u xal tuubooyin.
Waxaan ku siin karnaa macaamiisheena iman kara la bulk, tafaariiqda, iyo PVC jumlada, PET, PP alaabta ceeriin tayada dhoofinta wanaagsan iyo caadadiisu-dhigay alaab ballanka.
Ee ku sugan Shiinaha
Currently ee ku sugan China oo soo saarta tuubooyin fasalka alaabta ceeriin wanaagsan macaamiisheena, waxaynu rumaysan nahay in ay ku siiyaan ku dhawaad size mid ka mid ah amarka la tayo wanaagsan leh . Waxaan ka qaban in wax cayriin iyo sidoo kale waxyaabaha caadadiisu-dhigay for tuubooyin sida;
PCV (chloride Polyvinyl) in ku yimaado foomamka plasticized iyo un-plasticized labada xidhan doorashada ee macaamiisha gagadoonka
PET (terephthalate polyetylen) tuubooyinka oo ka badan ay sumcad sabab u ah tayada xad-dhaaf ah
PP (polypropylene) oo loo isticmaalo sida alaabta ceeriin oo loogu talagalay rakiban ama ujeedooyin kale
qalabka kale ee cayriin loo isticmaalo warshadaha ee habboon iyo tuubooyin
Iyada oo eber siyaasad dulqaad on tayada, waxaan u muuqdaan in ay bixiyaan kasta oo wax soo saarka taaghayn baaro iyo marsiiyey la heerarka Shirkadda oo ay weheliyaan qaar ka mid ah heerarka kale ee caalamiga ah cayayaan ee warshadaha tuubooyin.
Naso xaqiijiyay aad soo iibsan doonaa qalabka ugu dadaala iyo xirfadeed ee ganacsigaaga.
AKHRI Attractive Plastic Cookies Packaging Box Design Tutorial
Fasalka Cuntada Qalabka
Sida xaqiiqada ah qalabka tuubooyin waxaa ku Qaddarray in loo isticmaalo in noocyo kala duwan oo ay ku jiraan warshado,
Taasi waa sababta aan u xajiyey dusha hoose oo qalabka tuubooyin our runtii siman oo lacag la'aan ah ka qalab kasta oo wadaniga ah. Taas oo haddii kale aad hoos u qasan lahaa cunto ama xubno kale oo muhiim ah oo warshado badan waxay leeyihiin si ay u isticmaalaan oo wuxuu keeni karaa dhibaatooyin.
Waxaan ku dari xuubka hoose oo ah alaabta our tuubooyin iyo alaabta ceeriin la HDPE ah (polyetylen High-Mugga) taas oo kor u dhigaa dusha u fiican oo badbaado ah iyo ma ogola isku dhafka ah cunto ama alaab kale oo inta badan loo isticmaalaa in industry.
Tani Yeeelid caag fiican gudaha tuubooyinka macaamiisha u oggolaanaya in ay u isticmaalaan iyada oo aan wax cabsi ah iyo sii dheereysato ganacsi iyo dad ka mid ah warshadaha.
Ee ku sugan Shiinaha, waxaan lahaa in ay dhex maraan hab culus oo muddo dheer ah helitaanka rukhsadda lama huraanka ah iyo kulli shuqulkii sharci ah oo gadashada / saarta wax tuubooyin halkan Shiinaha.
Haddaba, waxaan la dhigay iyo soo saarka ah u aragto dhakhso leh maalin kasta marayay. Waxaan ku jiraan xaalad ah si ay u bixiyaan macaamiisheena la magnitude oo dhan ee amarka sida ay arkaan taam u ganacsigooda.
AKHRI How to choose patterns for plastic packaging design?
AKHRI How to Create Snacks Food Pouch (For Beginner)
Waxaan u muuqdaan in ay soo diri warbixino kala duwan oo isku xigta oo ay isku xigta taas oo macmiilka la hagaajiyaa ka badan horumarka amarka taas oo uu isagu / iyadu kaalinta.
Aw, in aad marnaba yeelan doonaan in ay ka welwelina gaarsiinta soo daahay ee amarkaaga, waxaynu og nahay sida ay u dareensan yahay marka aad ku taageeray soo baxay by saarayaasha ku saabsan amarada marka aad u baahan tahay ugu.
daryeelka 24/7 macaamiisha
Waxaan marna ka tago macaamiisheena deeqsi laalaaday ee u dhexeeya iyo isku dayaan in ay weli ku xiran macmiil ah 24/7.
wax dhibaato ah soo baxdo in gaarsiinta, ama wax soo saarka ma yihiin ilaa heerka aad kaliya na siin call a oo aan xaq u gal dhibaatada jiri doonaa, oo waxaa sixi doona idinku sugan waqtiga ugu yar ee suurto gal ah.
Business in ay is dhexgalka Business
Tegaayo walwal bixinta badeecada si ay macaamiisha shaqsi, waxaan u muuqdaan in ay bixiyaan adeegyo si aan u soo iibsada bulk iyo ururada la xiriira.
This entry was posted in Baakada caagaiyo tagged CPVC, impact copolymer, PET , Polyester, Terephthalate polyetylen , polypropylene, Polyvinyl Chloride , PP , Propylene Homopolymer, PCV , PVC factory, PVC material factory, raw material, raw material factory, UPVC.
# 2019 Product qurxinta Taxana Baako ee Design iyo Waxyaabaha 114 views
Metalized koley Vs bireed koley: Waa kuwee Mid ka mid ah ma ka fiican? 77 views
Clear caaga-PCV Box Shirkado Factory & jumladlayaasha Soo-saareyaasha Shiinaha 70 views
Best PVC PET PP qaydhiin Waxyaabaha qeybiye 67 views